Tanjona Ara-Panoratàna 2018 : Fahafantarana Ny Fomba Fiasàn’ny Media Dizitaly Tantanin’ireo Vazimba Teratany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2018 4:52 GMT
Comunicación Comunitaria tao Santa María ao Chiquimula – Goatemalà. Sary avy amin'i Daniel Cotillas ary nampiasàna ny lisansa CC BY-SA 2.0 .
Ny taona 2018, ireo tonian'ny famoaham-baovaon'ny Global Voices, ny lehiben'ny sampana, ary ny mpikambana ao amin'ny ekipa samihafa ao aminy dia hanandrana fomba fiasa vaovao eo amin'ny asanay : mametraka tanjona amin'ny antsipiriany ary manaraka akaiky ny fandrosoanay ao amin'ny Bilaogin'ny Vondrom-piarahamonina. Anatin'ito lahatsoratra manaraka ito, ny talen'ny Rising Voice, Eddie Avila, no manolotra ny vinavinan'asany ho an'ny ampahany voalohany amin'ity taona ity.
Mety efa fantatrao ihany angamba, fa miara-niasa amin'ny NewsFrames ny Rising Voices amin'ilay tetikasa iray vaovao mahafinaritra antsoina hoe “Rising Frames” izay mitondra ny tsara indrindra amin'ireo tontolo roa ireo mba hakàna fijery mifototra amin'ny angona fitantaràna anaty aterineto. Mifantoka manokana amin'ny tanjon'ny RV izay manohana ireo vondrom-piarahamonina tsy voasolo tena firy amin'ny asa ataony anaty aterineto ary ny fampiasan'ny NF ny angona mba handalinana momba ny fanambaràn'ireo filazambaovao samy hafa, tetikasa nanomboka tamin'ny andianà lahatsoratra nampitondraina ny lohateny hoe “Tantara averina faritana” tamin'ny alalàn'ny resadresaka nifanaovana tamin'ireo teratany Ekoatoriana mba tsy hijery fotsiny ny fomba fanehoana any anaty haino aman-jery nasionaly ny vondrom-piarahamonin-dry zareo na ireo olana manan-danja amin'izy ireo, fa hiara-hiasa amin'izy ireny mihitsy hanampy hamaly ireny fitadiavana angon-drakitra ireny.
Ny vokatra dia andianà lahatsoratra avy amin'ireo solontena dimin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ao Ekoatora, izay voafintina tsara anatin'ity lahatsoratra navoakan'ny mpiara-miasa amintsika Belen Febres-Cordero ity. Rehefa nifandray tamin'ireo vondrom-piarahamonina hafa manerana an'i Amerika izahay, ary amin'ity indray mitoraka ity, ny any Kolombia Britanika ao Kanadà, nahaliana anay indrindra ny hahafantatra ny fomba fampitahàna sy fifanoherana isam-paritra nentina nanehoana ny vondrom-piarahamonin'ny vazimba teratany sy ireo Firenena Voalohany teny anaty media.
Mazava ihany koa fa mihamaro hatrany ny vondrona mampiasa ny tanjaky ny aterineto sy ny filazambaovao nomerika ho fitaovana hanombohana ny filazambaovaony na ny tetikasany manokana. Tianay ho fantatra amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra manodidina ny namoronana ilay tetikasa, ary koa ny fomba fiasan'io tetikasa io.
Ny Tanjonay Amin'ny Fanoratàna
Ny RV dia te-hamorona andian-dahatsoratra maromaro fanao anaty bilaogy hanasongadinana ny filazambaovao nomerika tantanin'ireo vazimba teratany sy ny asan'izy ireny mifandraika amin'ny fanehoana ny vondrom-piarahamoniny eny anaty haino aman-jery. Tsy hanontany azy ireo fotsiny ny heviny momba ny maha-zava-dehibe ny haino aman-jery izahay, fa te-hahalala momba ny fanamby atrehin'izy ireo ihany koa, ny anton'ny nanombohan'izy ireo ny tetikasany, ary koa ny paikady sy ny fitaovana nomerika na sehatra ampiasain'izy ireo.
Tsapanay fa tena zava-dehibe ny fahafantarana bebe kokoa ny fomba fiasa toy izany eny amin'ny fiarahamonina isan-karazany eny mba hahafantarana misimisy kokoa ireo paikady, fitaovana, ary ireo fanamby atrehina. Raha vao mivoaka ny lahatsoratra, dia ho afaka hadikan'ireo ekipa Lingua mahafinaritra, izay hanitatra ny faritra ho tratran'izy ireny sy hanamafy ny feony any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao.
Dingana 1 – Hiaraka hiasa amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Rising Frames hametrahana miaraka ireo sokajim-panontaniana izay azo ampiasaina ho teboka fanombohana. (hatramin'ny 23 Feb.)
Dingana 2 – Hamantatra sehatra media tantaninà vazimba teratany, 6 hatramin'ny 8 havondrona ao amin'io sokajy io (hatramin'ny 2 Martsa)
Dingana 3- Hanao fanadihadiana anaty imailaka, ary mety ho ampiana Skype na chat ihany koa (2- martsa)
Dingana 4 – Handray mpikambana ao amin'ny GV izay liana handray anjara amin'ny fanadihadiana sy fanoratana mba hanampy anay hamantatra tetikasa media hafa tantaninà vazimba teratany mety ho azo asongadina.(Martsa16 – 30 Aprily)
Dingana 5 – Hizara ireo lahatsoratra ho toy ny ampahany anaty andiany ary mety ho Pejy Fandrakofana Manokana mihitsy (rehefa vita izy ireo)
Amin'ny fanadihadiana filazam-baovao maromaro tantanin'ireo vazimba teratany tao amin'ny faritra Amerika, ary angamba any an-toeran-kafa manerana izao tontolo izao, dia ho afaka isika hanangana tambajotra goavana izay azon'izy ireo hifampizaràna lesona, paikady handresena paikady, ary ny fiantraikany. Manantena izahay fa ny 1-2 amin'ireo hetsika noresahina dia haneho fahalinana ambony amin'ny fandraisana anjara mavitrika kokoa ao amin'ny Rising Frames amin'ny fahitàna ny mety ho fandehan'ilay tetikasa ho azy ireo amin'ny alàlan'ny fandalinana ireo angon-drakitra mifandraika amin'ny fanehoana ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo na ireo olana manan-danja amin'izy ireo ary hamoaka tantara ifandrimbonana hamaly ireo zavatra hitany.